Iipolisi kunye neNkqubo zoKongeza kwi-Handbook yakho
Ukuze igumbi lakho lokufundela liqhube kakuhle liya kufuneka libhale imigaqo-nkqubo yakho kunye nenkqubo yeencwadi. Esi sikhokelo esiluncedo siya kukunceda wena nabafundi bakho (kunye nabazali) bazi kakuhle oko ukulindele kuzo. Nazi imimiselo embalwa yeentlobo zezinto onokuzifaka kumgaqo-nkqubo weklasini kunye neenkqubo zesikhokelo.
Imihla yokuzalwa iya kubhiyozelwa eklasini. Nangona kunjalo, ukuze kuqinisekiswe ukhuseleko lwabafundi bonke eklasini nakulo lonke isikolo kunye nokunyanga kokupheliswa komzimba, akukho mveliso yokutya enokuthunyelwa kuyo leyo iquka i-peanuts okanye i-nut nuts.
Ungathumela kwizinto ezingezizo zokutya kunye neentsimbi, iipensile, iifowuni, iibhogi ezincinci, njl njl.
Incwadi ethi I-Scholastic order order flyer izothunyelwa ekhaya nganye inyanga kwaye iintlawulo mazifumaneke ngomhla oqhotyoshelwe kwiflaya ukuze kuqinisekiswe ukuba umyalelo uya kuphuma ngexesha. Ukuba unqwenela ukubeka umyalelo we-intanethi, uya kunikwa ikhowudi yeklasi ukwenza njalo.
Udidi lweDoJo lulawulo lokuziphatha kwe-intanethi / iwebsite yeklasi yoqhagamshelwano. Abafundi baya kuba nethuba lokufumana amaphulo ngalo lonke usuku ukubonisa indlela yokuziphatha kakuhle. Abafundi nganye nyanga banokuzihlawulela amaphuzu athathwe ngembuyekezo eyahlukeneyo. Abazali banokukhetha ukukhuphela i-app eyakukuvumela ukuba ufumane izaziso zemiyalezo kunye nemiyalezo kulo lonke usuku lwesikolo.
Ukwakha nokugcina ubambiswano phakathi kwekhaya nakwi sikolo kubalulekile. Uqhagamshelwano lwabazali luya kuba ngeveki ngokubhala amanqaku ekhaya, i-imeyile, i-newsletter yeveki, kwi-Class Dojo, okanye kwiwebhsayithi yeklasi.
NgoLwesihlanu ngalunye, abafundi abaphendulele yonke imisebenzi yabo baya kufumana ithuba lokuba bathathe inxaxheba kwimisebenzi ethi "Ngolonwabo ngoLwesihlanu" eklasini lethu. Umfundi ongaqedanga yonke imisebenzi yasekhaya okanye eklasini akayi kuthatha inxaxheba, kwaye uya kuhamba kwelinye iklasi ukuze abambelele kwizabelo ezingaphelelanga.
Yonke imisebenzi eyabelwe ekhaya iya kuthunyelwa ekhaya kwifolda yokuthatha ekhaya nganye ebusuku.
Uludwe lwamagama esipelwimi luya kuthunyelwa ekhaya nganye ngoMvulo kwaye luya kuvavanywa ngoLwesihlanu. Abafundi baya kufumana iibalo, ubugcisa beelwimi, okanye olunye uxwebhu lwekhaya ekhaya ebusuku. Yonke imisebenzi yasekhaya kufuneka iguqulwe ngosuku olulandelayo ngaphandle kokuba luchazwe ngenye indlela. Ngeke kubekho umsebenzi wesikolo ngeveki, kuphela ngoMvulo-ngoLwesine.
Incwadana yethu iya kuthunyelwa ekhaya ngoLwesihlanu. Le ncwadana iya kukugcina uhlaziye kwizinto ezenzeka esikolweni. Unokufumana kwakhona ikopi yale ncwadana kwiklasi yeklasi. Nceda ubhekisele kule ncwadana naluphi na umgangatho weklasi kunye nenyanga kunye nolwazi lwesikolo jikelele.
Abavolontiya bomzali bahlala bemkelekile eklasini, kungakhathaliseki ukuba ngabafundi beliphi ixesha. Ukuba ngaba abazali okanye amalungu omndeni anomdla ekuncedeni kwiziganeko ezizodwa okanye bangathanda ukunikela ngempahla okanye kwizikolo zamagumbi okufundela, kuya kuba nephepha lokubhalisa kwigumbi lokufundela, kunye nakwiwebsite yeklasini.
Ukufunda kuyisakhono esibalulekileyo nesimfuneko ukuqhuba ubusuku bonke ukuze uphumelele kuyo yonke indawo. Abafundi kulindeleke ukuba bafunde imihla ngemihla. Abafundi nganye ngenyanga baya kufumana umxholo wokufunda ukulandelela inani lexesha elichithwe ekufundeni ekhaya.
Nceda ungene ngemvume kwirekhodi nganye iveki kwaye iya kuqokelelwa ekupheleni kwenyanga. Ungayifumana le log yokufunda ifakwe kwifolda yakho ekhaya.
Nceda thumela kwi- snack ephilileyo imihla ngemihla nomntwana wakho. Le ntanki ye-peanut / tree nut ezamahala inokuba yintoni na evela kwi-goldfish, i-crackers yezilwanyana, iziqhamo, okanye i-pretzels, kwimifuno, iintonga ze-veggie, okanye nayiphi na into onokuyicinga into ephilileyo kwaye ikhawuleza.
Abafundi bakhuthazwa ukuba bangenise ibhotile yamanzi (azaliswe ngamanzi kuphela, akukho nanye into) kwaye bayigcine edeskini. Abafundi kufuneka bahlanjululwe kakuhle ukuze bahlale bejolise kulo lonke usuku lwesikolo.
Iklasi lethu linayo iwebhusayithi. Zininzi iifom zinokukhutshwa kuyo, kwaye kukho ulwazi oluninzi lweklasi lokufunyanwa kuyo. Nceda ubhekise kule website ukuze wenze nayiphi na imisebenzi eyabanjwe ekhaya, imifanekiso yamagumbi okufunda, okanye nayiphi na enye inkcazelo.
Yiyiphi Intluphu yokuBa?
Iphepha leBasebenzi labangenanto - iThabhu, abasebenzi kunye namaChord Sheets
I-Orion Crew Capsule: Isinyathelo esilandelayo kwi-Spaceflight yabantu